Natiijada Ra’yi Ururin Shalay Soo Bandhigtay Fikirka Uu Ra’yul-caamka Bulshadu Ka Fahmay Heshiiskii JSL/DPW | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Natiijada Ra’yi Ururin Shalay Soo Bandhigtay Fikirka Uu Ra’yul-caamka Bulshadu Ka Fahmay Heshiiskii JSL/DPW
Hargeysa (Hubaal) – Shacabka Somaliland ee ku dhaqan gudaha iyo dibeda dalka ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiska maalgashiga ee casriyeynta iyo balaadhinta dekeda Berbera oo Salaasadii xukuumada Somaliland la saxeexay xukuumada Imaaraadka Carabta oo shirkada adeegyada Dekedaha ee DP World metelaysay. Heshiiskan oo muddo dheer wada xaajoodkiisu u dhexeeyey xukuumada Somaliland iyo shirkada DP World, isla markaana hordhacii nuxurka iyo qodobada uu ka koobnaan doono hore labada dhinac ugu wada saxeexdeen horaantii sannadkan magaalada Dubai, ayuu goobjoog ka ahaa Madaxweynaha JSL Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilanyo). Saxeexida heshiiskii u dambeeyey ee balaadhinta iyo casriyeynta dekeda Berbera ooo wefdi xukuumada ka socda isla markaanaa hogaaminayo Madaxweyne-xigeenka Somaliland Mr. Cabdiraxmaan cabdillahi Saylici, ayey shacabka gobolada dalku si weyn u soo dhoweeyeen, isla markaana ku sheegeen inuu yahay fursad dalka gelin doonta horumar balaadhan dhinac walba, isla markaana bulshadu ka heli doonto shaqo abuur. Fikradaha shacabka gobolada dalka qaarkood oo ka dhiibteen aragtidooda ku aadan heshiiska maalgelinta dekeda Berbera ka soo uruuriyeen telefishanada BulshoTv iyo Universal, soona diyaariyey weriye maxamuud walaaleye, ayey gabadh degan magaalada Gebilay tidhi, Waan soo dhoweynayaa heshiiska casriyeynta dekeda Berbera ee la dhameeyey. Waan ku hambalyeynayaa Madaxweynaha JSL, waxaanan leenahay madaxaaga iyo minjahaaga Ilaahay ha raajo, kuuna ducaynaynaa. waxqabad aan la koobi karin ayaa xukuumada Kulmiye eed gadhwadeenka ka tahay dalka ka qabatay, taasoo wakhtigan aynu hiigsanayno wadamadda caalamka dhinac dhismeyaal, wadooyiniyo dhinacyada kaleba. nin kale oo shacabka Gebilay ka tirsan ayaa yidhi, “Go’aanka xukuumadu ku qaadatay heshiiska dekeda, oo golaha Wakiilada ee ummada metela la soo hordhigay waxaan qabaa inay waajib tahay in horumarka laga shaqeeyo, waanu taageersan nahay. Shacabka Gobolka Awdal oo ka hadlayey fikirkooda heshiiska dekeda Berbera ayaa nin dhalinyaro ah oo ka hadlayey yidhi, “Heshiiska maalgelinta dekeda waxaan u arkaa mid mustaqbal ifaya u leh dhalinyarada dalka, waanan soo dhoweynaya, kuna hambalyeynayaa go’aankii xukuumadu kaga dhabaysay gaadhitaankiisa. Nin kaloo meherad ku haysta magaalada Boorama oo ka hadlayey siduu u arko ayaa yidhi, “Waxaan u arkaa heshiiska dekeda Berbera mid taariikhi ah oo u dan ah ummada Somaliland, maadama dekedu tahay meel ka dhexeysa. Nin Dhalinayaro ah oo isaguna fikirkiisa ka hadlayey ayaa yidhi, “Waan soo dhoweynayaa wax kastoo horumar ah, dekeda Berbera in badan ayey tebaysay horumar, dekeda uun maahee mashruuca Berbera Corridor ayaa wadanka horumarkiisa ku filan. Nin odey ah oo ka hadlayey siduu u arko heshiiska maalgaashiga dekeda Berbera ayaa yidhi,
nin kale oo fikirkiisa ka dhiibanayey ayaa yidhi, ” Aad baan u faraxsanahay heshiiska dekeda Berbera, Ilaahay baa mahad leh inoo dhameeyey, shacabkuna ha ka ilaashadaan fursadan cadowga gudaha iyo dibedaba. Nin kale ayaa isaguna yidhi, “Waan soo dhoweynayaa heshiiska dekeda, maadama uu yahay mid dalka iyo dadka faa;iido u leh, waanan salaamayaa shirkada DP World iyo madaxdeeda. Shacabka magaalada Berbera oo fikirkooda ka dhiibanayey ayaa nin ka mid ah yidhi,